Banaanbax looga soo horjeedo Faraniiska ayaa ka dhacay magaalada Burco ee gobolka Togdheer… – Hagaag.com
Banaanbax looga soo horjeedo Faraniiska ayaa ka dhacay magaalada Burco ee gobolka Togdheer…
Posted on 27 Oktoobar 2020 by Admin in National // 0 Comments
Banaanbax looga soo horjeedo dowlada Faransiiska ayaa maanta waxa uu ka dhacay magaalada Burco Gobolka Togdheer ee Maamulka la magac baxay Somaliland.
Dadka ayaa sitay boorar ay ku qoran yihiin erayo ka dhan ah Faransiiska, iyaga oo sidoo kale gubayay sawirka madaxweyne Emmanuel Macron .
Dadka ka dhex muuqday dibadbaxa waxaa ka mid ah ganacsatada magaalada oo sheegay inay joojin doonaan badeecadaha ka timaadda Faransiiska.
Ololaha qaadacaadda alaabta uu soo saaro Faransiiska ayaa ku baahay dalal badan oo Carab ah, taa oo ka dhalatay hadalkii Madaxweynaha dalkaas Macron, ka dib weerarkii lagu dilay macallimkii ardeydiisa tusay sawir lagu sheegay Nabi Maxamed NNKH.
Ka hor dilka macalinkaas, Madaxweyne Macron wuxuu islaamka ku tilmaamay diin qalalaase ku jirta isla markaana wuxuu ku dhawaaqay qorshe uu ku sheegay in uu kaga hortagayo ‘Islaamiyiinta doonaya gooni u goosadka”.